अण्डा खाँदा मोटाइँदैन बरु वजन घट्छ ! – Khabar Silo
मानव स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न सन्तुलित आहार जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि मानिसले सबै खानेकुरा मिलाएर खानुपर्छ ।अण्डामा मानव शरीरका लागि चाहिने अधिकांश तत्व पाइने भएकाले यसलाई प्रोटिनको पूर्ण स्रोत मानिन्छ । अण्डामा क्याल्सियम, आइरन, प्रोटिन, भिटामिन ए, फस्फोरस, भिटामिन डी, ई तथा जिङ्क लगायतका तत्वहरु हुने गर्दछ ।
यसले बालबालिका तथा गर्भवती महिलालाई निकै लाभ पुर्याउने गर्दछ । चिकित्सकका अनुसार अण्डामा दुर्लभ पौष्टिक तत्व समेत पाइन्छ। अण्डालाई पोषणविज्ञहरुले सुपर फुडको उपमा दिएका छन् । अण्डा खानुका फाइदाहरु यस्ता छन्–
१. वजन घटाउन सहयोगी
कतिपय मानिसमा अण्डा खाए मोटाइन्छ भन्ने गलत मान्यता छ । तर अण्डाले मोटोपनाबाट पीडित मानिसहरुलाई वजन घटाउन सहयोगी भूमिका निभाउने गर्दछ ।
२. रतन्धोबाट रोक्न
अण्डामा हुने ल्युटिन तथा जेक्जान्थिन नामक एन्टिअक्सिडेन्टले रतन्धो तथा छिटै दृष्टि कमजोर भएर दृष्टिवीहिन हुने जोखिमलाई न्यून पार्दछ ।
३. मुटुरोगमा उत्तम
अण्डाको सेवन उक्त रक्तचाप भएका ब्यक्तिलाई समेत लाभदायी हुन्छ । अण्डामा हुने तत्वले हाइपरटेन्सन घटाउनुका साथै मुटुरोग, हृदयाघात लगायतका रोगको जोखिम समेत कम गर्छ ।
अण्डामा हुने टाइरोसिन नामक एमिनो एसिडले मस्तिष्क तथा स्नायुको चेतनामा वृद्धि गर्ने गर्दछ । यि तत्वले मस्तिष्कसम्म सूचना प्रवाह गर्ने अणुको निर्माणमा समेत भूमिका खेल्दछ ।
५. प्रोटिनको श्रोत
अण्डामा उच्च गुणस्तरीय प्रोटिन पाइन्छ । यसले मानव शरीरको मुख्य संरचना, तन्तु तथा अणु बनाउन मद्दत गर्छ ।
हामीमध्ये कतिपयको कपालमा चायाका समस्या हुन सक्छ । चाया आफ्नो कपालबाट हटाउन नसक्दा तनाव भइरहेको हुन सक्छ । अझ गर्मीमहिनामा कपालको विशेष ख्याल राख्नु निकै जरुरी हुन्छ । आखिर कसरी ? आज हामी तपाईंलाई केही टिप्स सेयर गर्दैछौं जसले कपाललाई चमकदार र मजबुत बनाउनुका साथै चायाको समस्याबाट टाढा रहनकालागि सघाउनेछ । घ्यु कुमारीले चायाको समस्याबाट […]
कुरिलो एक किसिमको वनस्पति हो । प्रायः सवैले कुरिलो चिनेको भएपनि यसको फाइदाबारे जानकारी नहुन सक्छ ।नेपालको मैदानी जंगलदेखि हिमाली भूभागसम्ममा पाइने कुरिलोलाई आयुर्वेदले औषधीको रानी मान्छ । कुरिलो काँडा भएको र नभएको गरी दुइ प्रकारमा पाइन्छ । उच्च हिमाली भेगमा पाइने कुरिलोलाइ अस्पारागस पिलिसिनस भनिन्छ यसको काँडा हुँदैन । तर औषधिय गुण भने समान […]